တစ်နာရီလုပ်ခ ကို တွက်ခြင်း | မာသင်
တစ်နာရီလုပ်ခ ကို တွက်ခြင်း
အချိန် (၃) မိနစ်လောက်ပေးပြီး လူငယ်များအားလုံးကို ဖတ်စေချင်ပါတယ်။
အကျိုးရှိစေမယ့်..ဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့ အတွေးအမြင်လေးတစ်ခုကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်က တစ်လကို ၁၂သိန်းရတယ်ဆိုရင် …
တစ်လအတွက် အလုပ်လုပ်ရက်ပေါင်းက ၂၂ ရက် ဆိုပါစို့။
ဒါဆိုရင် တစ်လကို အလုပ်ချိန်ပေါင်းက ၁၇၆ နာရီ။
တစ်နာရီအတွက် လုပ်ခပျမ်းမျှကို တွက်လိုက်ရင် ၆၈၁၈ ကျပ်။
သူ့အသက်က ၃၅ နှစ် ရှိပြီဆိုရင် …. ( ပျှမ်းမျှသက်တမ်း ၈၀ဆိုရင်) အကြမ်းအားဖြင့် နောက်ထပ် ၄၅ နှစ် ပေါ့။
ကျန်ရှိတဲ့ ရက်ပေါင်းကိုတွက်ရင် .. ၁၆၀၂၀ ရက်.
ကျန်ရှိတဲ့ နာရီပေါင်းကို တွက်ရင် …၃၈၄၄၀ နာရီ။
(အလုပ်က စနေ ၊ တနင်္ဂနွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်..)
အလုပ်ချိန်ရက်ပေါင်း .…၁၁၇၀၀ ရက်
အလုပ်ချိန်နာရီပေါင်း .. ၉၃၆၀၀ နာရီ၊
တစ်နာရီလုပ်ခ နဲ့ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ အလုပ်ချိန်နာရီပေါင်း မြောက်လိုက်ရင် တစ်သက်စာလုပ်ခကိုရပါတယ်။
၆၈၁၈ x ၉၃၆၀၀ = ၆၃၈၁၆၄၈၀၀
၁၀% လောက်စုနိုင်မှ ၆၃၈ သိန်း ရပါမယ်။
ဒါတောင် ..အသက် ၈၀ ထိအလုပ်လုပ်နိုင်မှ။
လတိုင်း ၁၂ သိန်းဝင်ဦးမှ။
ငွေစုခြင်း ဆိုတာတစ်ခုတည်းနဲ့ မချမ်းသာ နိုင်ပါ။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဆိုတာ ငွေကိုငွေချင်း ရင်းပြီး ပွားစေတာပါ။
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဆိုတာ ငွေကြေးပညာ ဖြစ်ပါတယ်။
ငွေကြေးပညာကို သိရင် ..ချမ်းသာမယ်လို့သေချာမပြောနိုင်ပါ။
သေချာတာကတော့….. ဘဝရဲ့အချိန်ပို ထွက်လာစေနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ အရာ ကို လွတ်လပ်စွာလုပ်ဖို့ သုံးနိုင်တယ်။
ကိုယ်နေချင်တဲ့နေရာမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာနေဖို့ သုံးနိုင်တယ်။
အသက်ကြီးလာသည်နှင့် အမျှ.… လူသားအားလုံး အလိုအပ်ဆုံးအရာဟာ… အချိန်.. ဆိုတဲ့အရာပါပဲ။
အဲဒီ .. အချိန်… ဆိုတဲ့အရာကို …အသက်ကြီးလာတဲ့အထိ မစောင့်ပဲ ….
ပြောနိုင်.. ဆိုနိုင်တုန်း …
ငွေကို ….ရင်းနှီးမြုပ်နှံပြီး .… “အချိန်” ကို …ပိုဝယ်ထားပါ။